John Smith CEO | 🥇 【# No.1 Ka m nyere gị aka! 】
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at April 22, 2019
John Smith CEO bụ nke a bụ aha m na aha m ;-), enwere m ike ịsị na m nwere onye wuru ya otu ụlọ ọrụ kachasị amasị na United Arab Emirates. Kwa ụbọchị, ọtụtụ nde mmadụ na-enwe ike ịhụ ọkwa m na Dubai, Qatar, Saudi Arabia.
I’m a professional Dubai manager. And I can say my experience can help you bụrụ ezigbo mmadụ na-eme nke ọma na ndụ ọkachamara gị. From the last 3 Years, I have managed to Start Doing coaching azụmahịa internationally. My life has never been so bright and nice as other successful coaches in Dubai or London.
Ndụ m jupụtara n'ihe ndị e mejọrọ na mkpebi ndị na-adịghị mma. N’ezie, echefuola m ọtụtụ puku dollar mgbe m na-ewu ụlọ ọrụ m Dubai City. Mana ị nwere ike ịhụ na ntanetị ka azụmahịa m na-ewu ewu na Facebook na LinkedIn ghọọ ugbu a.
Ntak emi afo ekpenyene nneme ye ami?
Oge ụfọdụ inweta ozi na ezigbo ndu ọ nwere ike. isi na ogugu gi. Ezigbo onye ọchụnta ego dị ka mụ onwe m, ọ ga - akuziri gị ọtụtụ ụzọ iji bụrụ azụmahịa na-aga nke ọma onye njikwa na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai.
Site na ahụmịhe nke m, ndị ahịa 5 ikpeazụ m. Na -achọ ọrụ ọkọlọtọ ma ọ bụ obere ọrụ. Kaosinadị, ha na-enwe na CV nza nke aghota aghugho. Ọzọkwa, thatzọ ederela mmalite amaliteghị na usoro mmepe dị larịị.
Yabụ, achịkwaara m onwe m ma banye nkọwa ha nke ọma. Edegola m extra ọrụ nke onye edemede m na otu ndị ọkachamara jisiri ike mee ka CV ha gaa n’ihu. Na nsonaazụ nke ndị ahịa m nwetara ọrụ na-atọ ụtọ site n'aka otu ụlọ ọrụ a ma ama si Abu Dhabi.
Maka na ejiri m ike nyere ọtụtụ ndị ọpụpụ aka. M n'onwe m tinye na jisiri ike inyere ndị si India, Pakistan, South Africa, Turkey and Philipines. And of course, I’m coaching people from the United Arab Emirates and my favourite Qatari nation.
Qatar bụ ọkacha mmasị m?
Kedu ihe na-eme? Azịza ya dị mfe. Ndi mmadu bi na Qatar bu otu n'ime mba ndị kachasị baa ọgaranya na mpaghara Gulf. Not the UAE nation. This is why I love to nchịkwa ha onwe ha.
Ruo ugbu a, m jisiri ike zụọ ndị si Qatar. N’eziokwu, ọtụtụ n’ime ha na-achọ ịga biri na UAE. Site na ebumnuche ego. Kama ka ha nwee ebe obibi kachasị elu. The United Arab Emirates is for sure a dream ebe to live and work. For example, hospitals and education’s are otu nke kachasị mma na mpaghara Gulf niile.
M hụrụ n'anya UAE anaghị m na-atụ uche ịghọta m Dubai bu ezigbo ebe mmadu nile no. Ọ bụ ya mere m ji malite ịmalite azụmahịa m na Emirates. Nrọ m afọ ole na ole gara aga bụ inyere ndị si mba ọzọ aka.
Ahụmịhe nkeonwem bara ezigbo uru nye ndị nwere ezigbo ahụmịhe. Karịsịa maka ndị nchịkwa gụrụ akwụkwọ ma nwee ọgụgụ isi nke ọma. Nkuzi ahia m bu ihe nkenke nye ndi njikwa ahia. Egoziiri m inyere ndị ọrụ aka zuru ụwa ọnụ.
Ọ bara uru itinye ego na ịnye ihe nhazi?
N’ezie, ọ bara uru karịa itinye ya n’ọrụ. Ezigbo onye nchịkwa azụmaahịa bụ bara uru karịa ka ị na-arọ. Ndụ m na nkuzi azụmaahịa na-enyere ndị ahịa m aka ime ihe karịrị 8,000 USD kwa ọnwa.
Eji m aka m na-ahazi nkọwapụta nke onye ahịa m ma gosi ha otu esi enweta oru ohuru ma gh’abu onye oru na-aga n’ihu onye nwe ya ma ọ bụ onye njikwa azụmaahịa ya.
Enwere ọtụtụ mba ọhụụ ebe ndị ahịa m dị ịmalite ịkpata ego ma ọ bụ ịnweta ọrụ ọhụrụ. Enwere mba ole na ole dị mma na Europe ebe ndị ahịa m na-akụ ma na-enweta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ Malta na Saịprọs ụbọchị ndị a dị mma ijikwa. Ma n'ezie, ọtụtụ ndị ahịa m na-ekpori ndụ mgbe ha na-eziga CV ha ebe ahụ.
N’aka nke ozo, nkem ebumnuche bu iwu ezi ahia ma ọ bụ gosi ndị ahịa m otu esi eme ya na otu esi enweta ego na ntanetị.
Dubai na Abu Dhabi bụ ebe kachasị mma iji mepee azụmahịa. Ọtụtụ n'ime ndị na-eche nche na-eche na inweta ezigbo ọrụ na UAE ga-eme ha ọgaranya. Mana n'eziokwu, enwere uzo ozo ibi ebi na oru na Emirates.
Thezọ kachasị mma iji nweta ego abụghị ọrụ. Ọ na - aghọ onye isi na azụmahịa mepere emepe. Ọbụna ụlọ mmanya dị mfe, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na azụmaahịa dị n'ịntanetị dịka ịzụ ahịa ọ ga-enyere ndị mmadụ aka inwe ihe ịga nke ọma na ndụ ha.
Let’s talk about me for a while. I love Quad biking and Jet Sky. And I do like driving sports ụgbọala na Inwe ezigbo ndu na ibi ezigbo ego na ndu m.
N’inwe ezigbo ahụmịhe nke ndụ, agarala m gburugburu ụwa ma jisie ike soro onye isi dị elu na-ekwu okwu na mbara ụwa. Nke a bụ ihe mere ị na-agụ post post m. Maka na ị chọrọ ịbụ nwoke nwere ọhụụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ onye ihe na-agara nke ọma ị ga-amụtakwa ịda mba. Ọzọkwa, daa ma gaa ihu. Ọ bụ ihe nwute, nke ahụ mekwara m. Ọtụtụ mgbe Etufuola m ọhụụ ma isi ike anapụ m olileanya m na ezinụlọ m ga-ebikwa ịda ogbenye.
May nwere ike ịna-eche Nwoke a m hụrụ na LinkedIn ma ọ bụ Facebook. Ugbu a na-eme ezigbo ego ọ dị m ka m bụrụ ya. Mana n'eziokwu, enwere m mgbanye itinye onwe m n'ọnọdụ dị oke njọ dịka ị na-achịkwa ugbu a.
Agbanyeghị, akaghị m ma ọlị karịa gị. Kedu ihe na-eme m iburu onye ahia na eme nke oma na ndu m?. M na-eme ka azụmahịa m nwee obere oge. Dika onye mere ya ma nwee otutu ikike na ahuhu iji nye ndi ozo ndụmọdụ. O doro anya na ịbanye na azụmaahịa Dubai bụ ihe ziri ezi.
Nhọrọ onwe - Ịga nke ọma agaghị eme n'oge
Mee ụdị njirimara gị na ndụ gị ugboro ugboro abụghị ezigbo echiche ịgbaso. Kama nye m bulie na azụmaahịa m. Otu ihe m ma n’aka. Ihe ịga nke ọma agaghị eme ka oge na-aga. Anọ m na-ekiri nna m mgbe niile na ọ bụ onye na-eme nke ọma na Ọchịchị. Ọ na-akpata ezigbo ego ma na-akwado ezinụlọ nke ọma. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na m dị obere, enweghị m ike ijikwa nke ọma na anyị ga-eme ya.
Ọ dị mma, Ọ bụghị onye ọ bụla na-aghọ ndị nduzi ma na-arụ ọrụ maka ndị ọchịchị kachasị elu. Mana otu ihe m na - amata n’ezie anaghị ada mba n ’ọrụ mgbaru ọsọ gị. Hardzọ siri ike nke iduga na ebe ndị mara mma.
Nna m gwara m mgbe niile ka m chee echiche banyere ikike. Emela mmejọ nzuzu ma na-aga n'ụzọ nke bụ naanị ụzọ iwu kwadoro. Nke a bụkwa eziokwu. Maka na ọ bụrụ na ị ga-agafe ebe adịghị mma otu ugboro. Enweghị nlọghachi. Dịka ọmụmaatụ, ị na-arụ ụka na akaụntụ nke gị ma na-anwa imefu ego na iche. Ọ bụrụ na ndị ọchịchị achọpụta ihe a, ị gaghị eme ezigbo ego anwa.
Ndị omempụ na-aghọ ndị omekome mgbe obere oge. N'ihi na ihe ga-ekwe omume ị nwere ike ịmechaa mgbe ị nwere ndekọ iwu ndị omempụ. Nweghị ike ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla dị mma. A ga-emechikwa ọtụtụ n'ime gị ụzọ.
Ntinye ego gi kachasi nma bu itinye oge gi na ikike gi. Shouldkwesịrị ịgbalị itinye ntakịrị ihe karịa. Soro na nzoputa gi ma nweta ezigbo njem ezumike. Ma ọ bụ nwaa ihe ọhụụ na ndụ gị. Nke ahụ na-arụ ọrụ n'ezie na ndị na-elekọta onwe ya. O nwere ike iju gị anya. Mana ezigbo enyi nke bụ isi na-eme ihe karịrị 200k USD kwa ọnwa naanị n'ihi na ọ nọ ebe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ọkachamara SEO ma nọ ọdụ na jacuzzi.
Onye nọ ya nso bụ onye na-ere ụgbọ ala na Dubai na London. Ha bido n’ikwu okwu, enyi m enwetara ya na nkwekọrịta maka ịmere ụlọ ọrụ ya ahịa. Yabụ, ịgba ezi ihe ịga nke ọma abụghị naanị ịgafe Ajụjụ ọnụ. Oge ụfọdụ na-enweta ikike gị ijekwuru ndị kacha mkpa.
Gbalịa iji ndụmọdụ m ma malite ibi ndụ gị ngwa ngwa. Ndị mmadụ na-eme ego ka ha ghara ịnọdụ na laptọọpụ n'ihu na-echere CV gị. Ha na-achịkwa ndụ ha na nhọrọ kachasị mma a tụrụ aha. Malite iche echiche na igbe ahụ ma were isi gị. Olileanya nke enyerela gị aka.
Ọfọn, obodo kachasị mma na Gulf bụ UAE. Na mbido, anyị na-ekwu maka Dubai anyị hụrụ n'anya. Dịkwa ka ị na-ahụ ụlọ ọrụ anyị na-eji, ahịa email, mgbasa ozi nkwalite na mgbasa ozi mmekọrịta ịchọta na iku ndị na-achọ ọrụ nwere ike inweta.
Inweta oru sitere na gburugburu uwa. Karịsịa site na Philippine na South Africa na United Arab Emirates, ọ bụ nnọọ ike jikwaa.
The Ụlọ ọrụ Dubai City and generally speaking a lot of firms n’obodo Ọwara. Kwa ubochi ikenye jibs na enye ihe na ahia. Gwa gị eziokwu
Anyị niile makwara nke ahụ LinkedIn bụ ụzọ kachasị mma ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Naanị akụkụ ọjọọ nke ụlọ ọrụ a bụ na enwere ọtụtụ asọmpi si India. Nke ahụ bụkwa okwu dịịrị onye ahịa m mgbe ọ na-achọ akwụkwọ maka ọrụ na Dubai.
Anyị ọ dị mma?
Nanị, ee n'ihi na ị ga - enwe ike inweta CV gị n'ihu puku kwuru puku ụlọ ọrụ na ndị isi nwere ike ịnọ ndị a na-agabiga na United Arab Emirates. Yabụ na nke a n'uche chọpụta ụzọ kachasị mma iji nweta ọrụ na ngwa ngwa. Nke ahụ bụ ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na social media bụ ọrụ na-enye kwa ụbọchị. Ma gị onwe gị dị ka onye na-achọ ọrụ nwere ike ịnweta ezigbo ezigbo uru site na iji profaịlụ LinkedIn gị ma ọ bụ ọbụna na-ejikọ ụlọ ọrụ anyị na naanị ịgbaso profaịlụ anyị.
Good nweta ezigbo ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai City ọ bụ nnukwu ekwe omume. Ihe ị ga - eme bụ ibugo CV na ndị nnọchite ụlọ ọrụ anyị. Mgbe ahụ anyị ga-elele CV gị ma chọpụta ihe na-ezighi ezi. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, otu ị ga - esi mee ka ngwa ahụ dị egwu na Ọrụ Emirates ahịa.
E nwere ọtụtụ ndị ọchụnta ego nọ na mpaghara Gulf. Site n'echiche anyị. Naanị 25% nwere ike iji nweta ọrụ na Dubai na ihe karịrị 30% na Abu Dhabi. Ihe dị iche na Dubai na Abu Dhabi bụ naanị oke nke Obodo. Agbanyeghị, obodo abụọ ahụ na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ ihe ruru ọtụtụ narị ụgbọ njem kwa ụbọchị. Ọrụ dị na Dubai bụ ụdị okomoko maka ndị bịara ọhụrụ bidoro na Emirates.
N'ihi na ebe ọ bụ na 2001 ndị njem ọhụrụ na-abịakwute Emirates. Karịsịa site na mba ebe ha na acho ibido ihe ohuru. And of course professional life. They must work for almost nothing, I was an immigrant a years before I opened Dubai City Companylọ ọrụ.
The Citylọ ọrụ Dubai City na-anwa inyere ndị mbịarambịa aka oge niile, karịsịa India na Pakistani workers in Dubai. For example, we are always looking forward to motivating and Na-eduzi ndị na-achọ ọrụ ọ bụghị naanị na UAE. But also in Qatar and Kuwait. Mostly about the visa process in the Gulf Region in the United Arab Emirates.
Agbanyeghị, azụmahịa a niile adịghị mfe iji mezuo. Nke a bụ ya mere ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ na-achọ ụlọ ọrụ anyị nkwado zuru oke.
Dɛm ntsi, onnyi na-agba mbọ igosi ndị na-achọ ọrụ maka otu ha ga-esi chọta ọrụ n’ụzọ ziri ezi. N'elu ederede, ị hụla ihe a ga-eme na usoro nke ọrụ yana otu esi ede CV na ebe ị ga-enweta ahụmịhe gị.
Na mpaghara Gulf
Kuwait na Qatar nwere ọtụtụ enwere ike inwe oru na ohere iru oru diri ndi agha.
N'ụzọ ziri ezi, ndị South Africa na Filipines bụ otu n'ime ndị isi ọrụ Dubai na Abu Dhabi. Na nkea, ụlọ ọrụ anyị etinyewo ọtụtụ puku ndị ọrụ si mba ndị a.
Ma, ụlọ ọrụ anyị kachasị na-enyere ndị si Asia aka dịka ndị India na ndị Pakistan gụrụ akwụkwọ nke ọma. On following years we start seeing people from Bahrain and Syria and countries who are most needed. For example Sri Lanka and even France.
Nke a bụ ya mere otu ndị ọkachamara anyị si dị na-achịkwa ọrụ ịchọ ndị ahịa ha na Emirates. Agbanyeghị, igosi gị ụzọ iji merie egwuregwu nke usoro ịchọrọ ọrụ na United Arab Emirates. Eleghị anya ụzọ dị mma iji meziwanye ndụ gị na United Arab Emirates.
Ma, anyị abụghị naanị oke na mpaghara Gulf mana anyị na-agba mbọ inyere ndị mmadụ aka n'ime ụwa. Naanị n'ihi na nke ahụ bụ otu narị ndị njikwa na ndị mmadụ nwere ahụmịhe NBA na ndị mmadụ dịka dọkịta na ndị injinia. Na ụdị ndị ahụ nwere ike ịnweta ọrụ na Dubai.
Na mbu, anyị na-ekwu maka profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta ebe ị nwere ike iji ya nweta ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta anyị na Facebook ma lelee profaịlụ Njikọ anyị. Companylọ ọrụ anyị na - eji mgbasa ozi na - elekọta mmadụ iji nyere ndị na - achọ ọrụ aka si gburugburu ụwa.
Ya mere, anyị na-enyere aka na United Arab Emirates na-ekwukarị n'obere mpaghara Gulf. Nke ahụ ga-abụ ebumnuche anyị oge niile. Iji nyere aka ọtụtụ mmadụ dịka anyị nwere ike inweta ọrụ na mba ofesi na Dubai City.
Esi achọta ọrụ na Dubai?
Anyị niile makwaara na LinkedIn bụ ụzọ kachasị mma isi rụọ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Shouldkwesịrị iji ọrụ ndị a iji nweta ọrụ na mba ọzọ.
Iji mee ihe n'eziokwu na ahịa ọrụ na India na Europe enwere ọtụtụ puku ụlọ ọrụ. Mana Citylọ ọrụ Dubai City na-anwa inyere ndị India na ndị Pakistan aka mgbe niile. Ha bụkwa ndị ọrụ anyị. N'ezie, enwerekwa ọtụtụ ndị ọrụ mpaghara nke weebụsaịtị anyị na UAE.
Ọmụmaatụ, Citylọ ọrụ Dubai City na-ele anya mgbe niile na-akpali ma na-eduzi ndị na-achọ ọrụ. Ọzọkwa, anyị na-enwe ahụkwu ohere na usoro visa na United Arab Emirates.
Inyere ndị ọzọ aka inweta ọrụ na Dubai bụ ihe anyị hụrụ n'anya maka ndụ. However, this whole deal is not that easy to accomplish. We are looking to help with writing a CV maka ndị ọgbọ.
Nke a bụ ihe mere anyị ji anwa anwa igosi ndi n’achọ ndi n’achọ oru n’uzo esi acho oru n’uzo kwesiri ekwesi. From begging of nyocha oru up to the physical job placement in one of the Emirates companies.
Na mpaghara Gulf, Qatar na Kuwait na n'ezie Egypt. Mba a niile na-asụ Arabik. Na enwere ọtụtụ ọrụ enwere ike ị nweta maka expats ebe ahụ. Nke a bụ ya mere ndị otu anyị na - egosi gị ụzọ iji merie egwuregwu nke usoro ịchọrọ ọrụ na United Arab Emirates.
Anyị hụrụ Emirates!
Na mbu, anyi na ekwu okwu banyere Ima ndi anyi huru n’anya. Gbalịa profaịlụ mmepe na UAE. Companylọ ọrụ anyị na-eji mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji nyere ndị nwere ike ịchọta ọrụ si n'akụkụ ụwa niile na United Arab Emirates na ikwu okwu n'ozuzu ya n’obodo Ọwara. Anyị niile makwaara na LinkedIn bụ ụzọ kachasị mma isi rụọ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Naanị n'ihi na ị ga - enweta CV n'ihu ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na ike Ndị isi ụlọ bụ ndị bụ n'ezie Bass na United Arab Emirates. Yabụ na nke a n'uche chọpụta ụzọ kachasị mma iji nweta ọrụ na ngwa ngwa. Nke ahụ bụ ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na social media bụ ọrụ na-enye kwa ụbọchị. Ma gị onwe gị dị ka onye na-achọ ọrụ nwere ike ịnweta ezigbo ezigbo uru site na iji profaịlụ LinkedIn gị ma ọ bụ ọbụna na-ejikọ ụlọ ọrụ anyị na naanị ịgbaso profaịlụ anyị.
N’aka nke ozo, oburu n’ile gi anya igha ndi mmadu, gi na ha gha gha ka iso ha na anya na LinkedIn. Ọzọkwa, ịnwere ike izigara ha ozi ma jụọ ha ọ bụrụ na ha na-enwe ụfọdụ ohere. N’akụkụ dị mma, ị nwere ike ịlaghachikwuru ha mgbe niile ma jụọ ha ma ha ga-enyere gị aka ma ọ bụdị jikọta gị na ndị a bụ ndị na-achọ ihe ọhụrụ. imepe ulo ohuru na Dubai ma obu Abu Dhabi.
Yabụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ikwu ihe ga-akachasị mma iji nweta ọrụ ahụ. O doro anya na anyị nwere ike ikwu na LinkedIn bụ usoro kachasị dị elu maka ịchọta ọrụ dị ka mgbakwunye. Naanị afọ gara aga nke ahụ karịrị nde mmadụ 5 sonyeere LinkedIn. Yabụ ị ga - enweta ohere iji soro ndị mmadụ nwee ọtụtụ mmadụ karịa ị maara ma ọ bụdị ị rọrọ nrọ
Chọta m na Facebook
John Smith CEO nke Dubai City Company
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị Facebook bụ naanị maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụfọdụ ntụrụndụ mmekọrịta ndị nzuzu nkiri na-ejikọta na ịgbaso ma na-achụ nwunye gị nwanyị mbụ ma ọ bụ ihe ndị dị otú ahụ. Ma n'eziokwu, Facebook bụ ngwá ọrụ ị nwere ike iji maka profaịlụ gị n'ihu ndị mmadụ na Dubai.
Ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-arụ ọrụ na Facebook dị ka a ikpo okwu iji kpoo ndi mmadu ego ma kwalite oru ha nye ndi Ohaneze. Yabụ ọ bụrụ n’ịhụ ụlọ ọrụ mọbụ na-ezigara ọrụ na-enye ọrụ ma ọ bụ nwee ọrụ aka ha, taa ndị mmadụ. Nke ahụ na - egosi gị ụlọ ọrụ a na - eto n'ezie na ọ ga - aba uru na ọ nwere anya na ebe nrụọrụ weebụ ha n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị akpọsa ngwa ahịa ka ha na - eme. Ọrụ nzipu ozi na-enye na webụsaịtị na ịnata ka anyị kwuo ihe gbasara ndị ọhụrụ na-eme 500 kwa ụbọchị.
Anọkwala na gị maara na enwere ọtụtụ mmadụ bụ ndị nwerela ọrụ ha na ndị isi ndị ọzọ na Facebook. Mgbe ụfọdụ ihe dị mfe izipu CVS maka ezigbo ohere ọrụ na United Arab Emirates ma ọ bụ ọbụna mpaghara golf. Smartzọ ezigbo mma nke ọ ga - achọta ndị na - achịkwa ezigbo ụlọ ọrụ na mba ndị ọzọ dịka Qatar na Kuwait.
Ee ee, n’ezie, ikpo okwu n’efu iji chọta ndi mmadu n’eme ihe dika ijikwa ndi oru dika Transportgbọ njem mba ofesi ma ọ bụ ọbụna ọdụ ụgbọ elu Dubai. Ha niile nwere akaụntụ Facebook na ọ bụ n'efu ịnyagbu ha n'oge ọ bụla na oge ọ bụla. Papa m, ọ ga - enyere gị aka wee zọpụta gị maka ịnọ ebe ọ na-enyocha ọrụ.
Onye isi oche nke Dubai City Company
Obodo m hụrụ n'anya Dubai!
Yabụ ma ọ bụrụ na-achọ ezigbo ọrụ nwere ezigbo ọnọdụ obibi ndụ na-anwale Dubai. Ndị mmadụ si gburugburu ụwa dịka ọmụmaatụ ndị si India na si Sri Lanka na-abịa ime nke mara mma kwa ụbọchị. Market kachasị mma bụ ịkwụwa aka ọtọ ịrụ ọrụ na United Arab Emirates bụ Azụ ahịa. Site n’ebe ahụ ị ga - achọta ezigbo ọrụ nke na - akwụ ezigbo ụgwọ. N'ihi na Economy a sitere na mmanụ na gas. Nke ahụ nyekwaara aka imezu maka ntụrụndụ ọdịnihu ebe enwere ike nweta obere ọrụ ka mma bụ ọrụ njem na injinia na Dubai. Mana tupu ị ga - eme ihe ị ga - emefu afọ ole na ole na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai.
Mkpebi gọọmentị afọ ole na ole laghachi azụ ọ bụ ịgbanwe site na akụ na ụba na-adabere na mmepụta mmanụ gaa na ọrụ ndị ọrụ na akụ na ụba na-ebute njem. Na nke a n'uche jikọrọ Arab Emirates na-eme mkpọtụ ghọrọ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya na mbara ala. Ebe Nzoputa m ọtụtụ puku ndị ọrụ na Dubai na Abu. N'ezie, ha na-akpọrọ ndị mmadụ gaa Sharjah. Ma site na iji usoro ndị a, ha niile na-arụ ọrụ dị ịtụnanya ọ bụghị naanị inyere ndị mmadụ aka kamakwa na-enye ndụ ọhụrụ dị ịtụnanya maka ndị si mba ofesi ọ bụghị naanị site na Eshia kamakwa site na Europe na Canada na kwa site na United States.
Mgbe afọ ole na ole gasịrị na Dubai mere ka ahịa nke ụlọ ahụ baa uru ma rụpụta ihe a na-akpọ ọgba na-ewu na 2004-2006. Oge ụra oge ụlọ na-abawanye ma ya mere ọtụtụ mmadụ na-anwa ịbịa na-arụ ọrụ na United Arab Emirates. Ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ọhụrụ na-amalite imeghe na iwu ụlọ ọrụ ha na etiti obodo Dubai. Ihe owuwu buru ibu emeela ka Dubai bụrụ obodo kachasị eto ngwa ngwa, ebe a na-atụnyere naanị obodo ndị kacha ibu na China. Nke a bụ ya mere obodo a ghọrọ nnukwu nke ndị ọrụ ala ọzọ. Based on the experience of countries such as Saudi Arabia and Qatar Dubai and Abu Dhabi start building amazing companies with ọrụ ndị ruru ogo dị elu na-enye.
Enwere m olileanya na ị ga-eme ya nye m ohere iji nyere gị aka inwe ọganihu na ndụ gị na ọrụ gị na UAE. Nkuzi ebumnuche m bu iji nye aka imepe aka nke aka gi ma obu ihu oru n’obodo ozo.
Nkwalite nke Onwe
Mmepe onwe onye bụ ihe na ihe ka ọtụtụ n’ime ndị ahụ nwere ahụmahụ chọrọ n'ezie. Otu n’ime ihe atụ a bụ inweta nkà gị n’ọkwa ọzọ. Iji maa atụ, ka anyị were nwa nwoke dị mfe sitere na Sri Lanka.
Onye ahụ ga-agụcha ụlọ akwụkwọ praịmarị ahụ ma kwaga ụlọ akwụkwọ praịmarị. Thezọ kachasị mma bụ inwe ọganihu n’ụzọ ịchọrọ ịrụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịrụ ọrụ na ịzụ ahịa na inwe mmepe nke ogo ogo iji wee gosipụta ihe maka onye were gị n'ọrụ. Gha-eme ihe n'eziokwu bu ndi n’etu ogologo ndu toro eto kwesiri ibu nke oma.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ inweta ma rute ndị were ya n'ọrụ. You should be ready to get extra miles to chọta ọrụ in Dubai and Abu Dhabi.
While progressing in your personal ọrụ Dubai. You should definitely look for a better experience. I have managed iji wuo ezigbo ulo oru na-aba uru karia ihe omuma m. Yabụ, ị ga - enweta bọl gị ma na - arụ ọrụ siri ike. Mụta ihe ọhụrụ na ndụ. Agbalị itinye onwe gị na ọrụ ọhụrụ na ahụmịhe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkwesịrị iche maka ịchọta agụmakwụkwọ na ọzụzụ onwe gị.
Yabụ, ịkwesịrị ijikwa atụmatụ ịme ihe gị. Ezigbo onye nkuzi azụmaahịa bụ Neil Patel na ụlọ akwụkwọ azụmaahịa ya. Ebe ahụ ị nwere ike ịmụ ka esi abụ ezigbo ahịa ahịa na otu esi ejikwa SEO gị.
N'ihe banyere mmepe oru aka, i kwesiri ikwenye Gbalịa lee anya maka ndị na-ede blọgụ a ma ama na UAE. N’eziokwu, ị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe n’ onlinentanet. Nke ahụ nwekwara ike ịbara gị uru ma ọ bụrụ na ị na-eme njem dị ukwuu na ọrụ gị.
Na-arụ ọrụ, na-amụta, na-ekpeghachi ma na-eso. Nke ahụ ga - enyere gị aka ị nweta ọtụtụ ego. Otutu ndi mmadu ịchọta ọrụ dị ịtụnanya bụ onye na-amụta mgbe niile ogologo oge otu ihe nka na ndi nwe ya nke n’aru ọkwa di elu.
Mmepe nke ụlọ akwụkwọ gị agaghị eme ya nyere gị aka ịbanye karịa ọkwa nchịkwa etiti. Naanị ahụmịhe ọrụ ga-enye gị ohere inweta ego na Dubai. N’ebe ọ bụla inweta ezigbo ọrụ na-ewe oge. Ahụmahụ nchịkwa ọ dị oke mkpa na Emirates.
Ya mere, nke a mere ị ga-eji gbalịa ịchọta onwe gị n'elu ndị isi kachasị elu na Abu Dhabi na Dubai. Ma i nwere ike ime ya naanị n'otu ụzọ. Site na inwe ahụmahụ zuru oke site gburugburu ụwa.
Career na Life Development na Dubai
Kedu ihe kpatara mmepe onwe onye dị ezigbo mkpa n'ọrụ anyị. Dubai abụghị obodo, ọ bụghị maka ndị agadi ma ọ bụ maka ndị na-eto eto. Dubai bụ obodo. Ọdịbendị nke mmepe teknụzụ. A na-ejikọkwa ebe ngosipụta dị ukwuu ebe ahụ omenala na ihe ijuanya. Teknụzụ mepụtara bụ ihe ịtụnanya na obodo ebe ị nwere ike ịhụ ụlọ elu kachasị elu ma detụ nri kachasị mma bụ ebe dịka ụlọ nri Arab. Ebe ndi mmadu niile choro ibi ma obu ime ezumike di nma.
Ọ bụrụ n’uche na ọ nweghị ihe ga-eju gị anya na ndụ na ị hụla ihe niile dị n’elu ụwa. I gha eme anya Dubai enye. Ọ bụghị naanị obodo na-enye nnukwu ebe ị ga-eri ma ọ bụ zuru ike. Mana kachasị, Dubai nwere nke ukwuu ezigbo ọrụ na-enye ga-ekele. Ọzọkwa, ego a na-akwụ gị nke ukwuu ma atụla ụjọ ịgagharị elu n'ihi na enwere ọtụtụ ọrụ dịka ndị dọkịta ruru eru. Maynye nwere ike ịrụ ọrụ na Europe nakwa na mba Arab
Ọzọkwa, ndị ọkachamara maka ọrụ, injinia, ndị nkuzi, gịnị kpatara ị ga-anwale ihe na-egbochi gị imezu nrọ gị. Kedu ihe na - eme ka ihichapụ ozi ịntanetị tupu izipu CV gị na Dubai City Company?. Gini mere ị ga - anwale ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ ?. At no na mkpi aka gi, nye onwe gi ohere iji zute ndi enyi gi na Dubai.
Ndị na-emepụta ihe na ndị ahịa na Emirates?
Ndị ọrụ na ndị na-azụ ahịa na-achọ ndị ọrụ na Emirates. Ọtụtụ mgbe zitere anyị ozi gbasara ụlọ ọrụ ha na ndị ọrụ ha chọrọ. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị anọwo na-enyere ndị ọrụ aka. Na site na ndị ọrụ ahụ na-ahụ anya kemgbe 2009 ịchọta ọrụ na Arab Emirates. Ma ihe dị na Qatar na steeti dị ka Kuwait na Saudi Arabia.
Ọ bụrụ n ’ị chetụla ma ọ bara uru ịmalite ọrụ na azịza anyị dị mfe, Ee, n’ezie, ọ bara uru na ọtụtụ mba, dịka ọmụmaatụ, United Arab Emirates. Ha anaghị anara ndị ọrụ ego ụtụ isi.
Yabụ na ọ bara uru ịnọnyere ụlọ ọrụ anyị. Nanị n'ihi na anyị nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ ọhụrụ. Ọzọkwa, iji wuo akụkọ gị na ahịa Dubai. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka na mbido. Ọzọkwa, anyị nọ ebe a iji nyere aka inweta ọmụmụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-enyere ndị si mba ofesi aka iji nweta ezigbo ọrụ na ịchọsi ike ọrụ na Dubai.
Ntak ịhọrọ Dubai dịka ebe ị ga-esi azụlite ọrụ gị?
Dubai bụ obodo dị ịtụnanya n'ezie nke anaghị ehi ụra. Ọ dị mma, n'eziokwu, puku kwuru puku ndị mmadụ na-arụ ọrụ n’obodo a na-enwe ike inweta nnukwu uru. Ọzọkwa, mmepe nke ọrụ dị mma karịa mma.
You can start work fast at Ụlọ ọrụ Dubai. In a really very high level, among other people who have lived in India and Bangladesh or Sri Lanka. Often expats tụrụ aro ụlọ ọrụ anyị na ndị enyi na ezinụlọ ha. N'ihi na anyị maara ihe a anyị na-eme, anyị anọwo na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ n'ọtụtụ ahịa obughi so na United Arab Emirates but also in Europe and in Canada na America.
N'ezie, ọrụ gị nwere ike ịmalite na Dubai, ma ọ gaghị ebede ebe ahụ. Enwere ọtụtụ ebe dị ukwuu ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na njem ị na-enweghị ike ihichapu.
Ọtụtụ mgbe, ndị chọrọ ịzụlite akparamagwa ha na ahụmịhe ha enwetala ọtụtụ afọ nke ọrụ siri ike na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Nwere ike ịga n'ihu n'ọrụ ha na Europe, dịka ọmụmaatụ na Ireland na Dublin ma ọ bụ na England na London.
Ndi ode akwukwo ndi Arab bu ezigbo mmadu! Nke ahụ bụ n'ezie!
Ndị odeakwụkwọ ndị Arab na-enwekarị ekele ndị ọrụ ha na Emirates na ụlọ ọrụ Qataris. Tinyezie ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. United Arab Emirates guzoro na ọkwa dị elu. Banyere nkwalite na imekọ ihe ọnụ nke mba niile, ọ bụghị naanị na Dubai kamakwa na London na New York.
Snyịnya na-esonyere gọọmentị mba Arab Emirates na ọ masịrị ndị ọrụ ndị si mba ofesi si Africa. N'ihi na ọbụghị na ha dị obere karịa nkezi ndị ọrụ si ma ọ bụ Pakistan, mana kwa oge n'ihi na ha na-arụ ọrụ oge ọrụ nke doro anya na-anabata ebe a.
Na mgbakwunye, ihe niile dị mma. Ọ bụrụ n ’ị na-eche Ọ bụ ọrụ naanị na Arab Emirates na obodo dịka Qatar na Saudi Arabia. Ọdịmma, ị ga-enwerịrị ahụmịhe n'asụsụ Arabik.
O bu ndi nwute, adighi enye ulo akwukwo a kwụrụ ụgwọ, mana ha na-enye usoro n’ime nzukọ. Ọmụmaatụ na ụlọ ọrụ mba ụwa ebe ị nwere ike nweta ahụmịhe dị mma. That will pay off in a few years when you are already getting into the njikwa ọrụ. It is just pleasure while working in one of the companies directly under the Sheikh from Saudi Arabia or Qatar.
Gịnị mere o ji baa uru ịmara mba ndị ọzọ, ọ bụghị naanị ndị Arab Emirates.
Ya mere, otu n'ime obodo kacha mma ị kwesịrị ịkwado. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ, ọ bụ imi imi.
Na nkenke, obodo a na-eji dollar na-agba adabaghị na ngalaba ọrụ nchịkwa mmadụ dị njọ. Kwa ụbọchị, ọtụtụ puku mmadụ na-arụ ọrụ na Qatar.
Youkwesiri ichesi echiche ike banyere ịrụ ọrụ na Qatar na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị nọ na mpaghara nwere ike ibute gaa nke ọma n'ihi na ndị odeakwụkwọ nọ na mba Arab na-achọkarị ndị ọrụ kwesịrị ekwesị maka naanị ụlọ ọrụ na Qatar.
You nwere ike ịchọ ọrụ siri ike n'ọtụtụ ebe, mana obodo dịka Qatar na-enye ohere ọrụ dị ịtụnanya. Ọtụtụ ndị njem nwere ike ịchọta ọrụ ebe ahụ. Ohere nwere ike ọ gaghị agwụ agwụ ma na-enye ezigbo ọrụ ọ bụla kwụsiri ike maka nkwekọrịta dị ogologo. Nanị ihe na-ebi ndụ na ịrụ ọrụ na Qatar bụ n'ezie na nkwekọrịta dị mkpụmkpụ.
Ọzọkwa, chọọ ọtụtụ akwụkwọ iji nweta nkwekọrịta ogologo oge. Inyocha onye omekome dịkwa mkpa ma ọlị. have gafee ule nke asụsụ Arabic na Bekee. Mana ịrụ ọrụ na mba nke ụdị a ga - eme ka ọdịmma ezinụlọ gị sie ike. N’ezie, gị na ezigbo ndị enyi na-enwekwa obi ụtọ n’ihi na ego ị na-enweta ebe ha enweghị ka mba ndị ọzọ. Iji maa atụ India ma ọ bụ Pakistan, atụnyere Qatar, ị ga-enweta obere oge 20 na-erughị nke ahụ bụ eziokwu.
Qatar na ndị ọrụ ala ọzọ?
Na Qatar, dị ka onye na-arụ ọrụ n'èzí, ịnweghị ike ịzụta ụlọ maọbụ wuo azụmahịa gị. Ọbụna dabere na ụlọ ọrụ dị ogologo n'ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nnọchite gọọmentị mana ọ bara uru ịtụle mmekọrịta na ndị ahịa azụmahịa Qataris.
Zọ ọzọ ọ ga - abụ na - enyere aka ịbata ndị ọrụ na Qatar maka na ọ bụ ebe ahụ ka ọtụtụ ndịamụta sheikh si Dubai bụ ndị dị nnọọ njikere iso ndị nwere ike inyere ha aka rụọ azụmahịa na obodo a. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a na Qatar. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewu ikike ha maka obodo dịka China na Vietnam.
Ọ bara uru itinye ego nke gị ugbu a. N'ihi na ndị sheikh si Qatar na-agakarị ebe ahụ ma na-amụnye nde kwuru nde na akụ na ụba, maka ọmụmaatụ n'ime ọrụ dị iche iche metụtara mmịpụta nke ọnya na ụlọ ọrụ na -ewu uzo uzo uzo ugboala, injincha mmanu mmanu na otutu ndi ozo.
Qatar jiri mba ndị ọzọ tụnyere obodo a na-emechi emechi, ma ọ dị mwute na ndị ọrụ nleta nwere ike ịnweta ọrụ.
Ebee ka ị nwere ike ịmepụta nnukwu ego na obere oge?
Ọ bụrụ n ’ibi na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi ka e jiri ya tụnyere obodo a ị na-akpata okpukpu abụọ na Qatar. I nwere ike ikwu ugboro atọ karịa na yabụ sọsọ bụ naanị na ịzighị ụlọ ebe ahụ. Mana ọ bụrụ n’aghaghachite na obodo gị na UAE.
Anyị niile hụrụ Emirates na ijide n'aka na ịchọrọ ịzụta ụlọ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi enweghị nsogbu, mgbe niile, ị nwere ike maka ego ị ga-enweta. Mgbe ị na-arụ ọrụ na Qatar, wuo alaeze gị na mba ebe amụrụ gị.
Ọ bara uru tupu ị gaa Qatar ka ị hụ ihe ọrụ ndị ahụ n'ihi na ahịa dị ka ebe ahụ, ma ị ghaghị ijide n'aka na n'oge ahụ, ha chọrọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na profaịlụ yiri nke ị na-eme ugbu a.
N'ezie, ịga Qatar na ịmalite ọrụ anaghị eme ka ị nwee ọganihu ná ndụ. Ma, ọ dị mma ịchọta na imi agba bụ ebe ị ga - enweta ọtụtụ nde dollar. Na-arụ ọrụ dịka onyeisi oche ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye nduzi nke onye nchịkọta ma ọ bụ onye nchịkwa.
N'ihi na na Qatar ọ bụ ihe na-ewu ewu na ụlọ ọrụ na-akwụkarị ụgwọ ego na ego ego maka inwe ike inyere ha aka ịmepụta akụkụ nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ mgbe ugbu a ụlọ ọrụ na-agbanwe ọrụ cryptocurrency ego na usoro ịkwụ ụgwọ dabeere na Blockchain.
Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma chee maka nnukwu nzọụkwụ na ndụ, Qatar bụ ezigbo ebe dị mma. N’ebe ndụ gị ga-agbanwe na mmepe profaịlụ ọkachamara gị ga-abawanye site na 40%, nke pụtara na ezinụlọ gị ga-enwe obi ụtọ na ezigbo ndị enyi gị ga-eji gị nganga.
Kedu mba m ga-atụ aro iji mee ka ohere ịnweta ọrụ gị dịgide?
Site n'ahụmahụ anyị, anyị maara na mba kachasị mma nke na-enye ọrụ ugbu a bụ mba ndị na-anwalekarị iji nye ndi ulo oru ohere imekorita ihe n'ogo kachasị elu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ebe a banyere mba Europe. Anyị na-ekwu banyere mba kacha mma maka ịzụ ahịa, ya bụ Cyprus Malta na France.
Mba ọzọ ebe ị nwere ike ịme ezigbo ọrụ ma mee ego mara mma na Saịprọs. Maka n'aka na obodo a, ị nwere ike ịnweta ikikere ọrụ ma rụọ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ.
Site na obodo a, ị nwere ike inweta ọtụtụ ahụmahụ n'ihi na obodo a dị mfe ịkwado ụlọ ọrụ ego na Europe. Nke a dị ezigbo mkpa iji zụlite azụmahịa mba ụwa dịka ihe atụ nke metụtara ịzụ akụ na ụgbọ elu na mba.
O kwesiri ileba anya nke oma banyere oru nke mba uwa. Na Europe, a na-agbakwunye ọtụtụ puku ọrụ kwa ụbọchị na ọdụ ụgbọelu. I kwesiri ile anya maka ugwo oru ugwo na Europe.
Ọtụtụ mba na-anya isi na iwebata ndị kwagara Europe. Ndị mmadụ ga-achọ ịmalite ndụ ọhụụ na ohere ọhụụ iji rụọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ nwere obi ụtọ dị ukwuu na Europe. Ma ha dịkarịa ala, ha na-abịa naanị ịmalite ndụ ka mma ga-enyere ha na ezinụlọ ha aka ịrụ ọrụ na nkịtị.
E jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ n'Africa ma ọ bụ India. Europe bụ ezigbo ebe. N'ebee ka ị nwere ike ọ bụghị naanị na-enweta ezi ego kamakwa ị na-azụ ụmụ gị na udo. O doro anya na oge ndị a anaghị adị mfe dịka ụlọ akwụkwọ dị mma ma ọ bụ ezigbo dọkịta dị nso n'ebe obibi gị ma ọ bụrụ mba ụwa atọ.
O bu ihe nwute, n’oge ugbua, igha n’ihu ịgwa onwe gi na ebe o di akụkụ dị oke mkpa na ndụ mmekọrịta n’ihi na ndị si mba ọzọ kwabata n’ezie amachaghị ibe anyị enyi enweghị enyi n’ebe anyị niile nọ. Ọ bụghị naanị na anyị na-ekwu maka ndị Europe kamakwa ndị mmadụ si India Bangladesh ma ọ bụ Sri Lanka.
The good country that our company recommends is Germany, which is constantly developing and attracting thousands of new employees. There are no problems na visa or racism. Work in Germany is ebe niile dị mma mgbe niile. Kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị ohere nke imekọ ihe na onye were ya n'ọrụ ka akọwapụtara na Usoro ọrụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ German anaghị abịaghị n'oge na-akwụ ụgwọ ma ọ nweghị ohere ọ bụla maka onye ọrụ ahụ.
Mba ọzọ na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịga bụ New Zealand na Iceland na Europe, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ si Arab Emirates na-emepe alaka ha n'ebe ahụ. Na New Zeland bụ ebe na-ama jijiji na-arụ ọrụ n'ihi na ego ahụ dị nnọọ elu ma e jiri ya tụnyere Emirates na India, dịka ọmụmaatụ, a na-etinye ego Icelandic n'ụzọ dị mma n'ahịa mba ụwa.
Ya mere ọ bara uru ịtụle mmekorita ya na ndị ụlọ ọrụ si mpaghara ahụ ?. Ee, ọ bụ n'ihi na, n'iji ya tụnyere ndị Arab Emirates na ọtụtụ mba Europe. ohere ịchọta ọrụ okpukpu abụọ n'ebe ahụ. Ọzọkwa, ego a na-enweta dị okpukpu anọ karịa nke ndị Germany ma ọ bụ na Great Britain.
Enwere m olileanya na ọ kọwaara gị ntakịrị ebe ị ga-achọta ọrụ na Europe ma ọ bụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa na ihe mere Ị ga-eji chọta ọrụ n'ebe ahụ ma ọ bụghị n'ebe ndị ọzọ n'ụwa.
Poland dị ka mba na-arụ ọrụ?
John Smith CEO - Abịaara m UAE. Ya mere, akụkọ m na - ekwu site na Poland ruo Dubai.
Poland bụ mba na-adọrọ mmasị nke ọma ebe ị nwere ike inweta ezigbo ego. Ikwu eziokwu. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere Central Europe, Poland na-eduga n'ọtụtụ ebe nwere ike ịkọwa dị ka ndị na-emepe emepe na Europe.
Obodo a ma ama maka eziokwu na mmanụ ụgbọ ala na nke mba dị n'ebe a dị elu, ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị na Europe, a ga-amata ọtụtụ n'ime ihe ndị nwere ike maka 30 na-esote 50 afọ ndị dị n'ihu.
Akụkụ ọzọ dị mma nke na nke a bụ na ị họrọkwa Poland dị ka ihe mgbaru ọsọ gị ịchọ ọrụ bụ na ọ bụ obodo dị nso na aha azụmahịa kachasị ukwuu, dịka ọmụmaatụ, ọ dị nso na Great Britain na Germany. Ọzọkwa, ọ dị nso na Malta Saịprọs na ị maara na Arab Emirates na-eso ndị ahịa Polish na-esonye. Theregbọ elu ga-efefe awa ole na ole.
It is worth to really spend a little time and think about the work in Poland. Ohere ndi oru n’obodo a n’enye ezigbo usoro mmepe oru aka. Karịsịa, Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ dị ka nchegbu mmanụ ma ọ bụ nchegbu ọgwụ. Poland bu ihe mbu n’ile anya ahia a. Stolọ ahịa na ụlọ nri na azụmaahịa na-azụlite ngwa ngwa ọ dịkwa mfe inweta ọrụ ebe a ọbụladị ka onye si mba ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ịrụ ọrụ na mba dị n'etiti Europe, ị ga-ahọrọ ụlọ ọrụ anyị n'ihi na anyị na-enyere ndị si mba ọzọ aka ịchọta ọrụ na Poland. N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị enweela ike inyere ndị si mba ọzọ aka ịchọta ọrụ na Poland.
Na ndị chọrọ ya n'ezie ma ga-achọ ịmalite ndụ ọhụrụ na mba ọhụrụ dị anya site na ezinụlọ ha mana mgbe oge ụfọdụ wetara ezinụlọ ha ma bido ịkpata ego. Yabụ, emeela ihe niile nke ọma ebe a, Poland nwere nnukwu ọrụ ahụike n'ihi na Poland nwere ebe ọgwụ nwere ezigbo ọzụzụ, ụlọọgwụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ bụ n'ezie ọkwa dị elu.
Na mgbakwunye, na Poland, ọ bụrụ na ịnwere ezinụlọ, nsogbu adịghị ị nweta ha site na Dubai ma ọ bụ site na India Pakistan ma ọ bụ Bangladesh. Gọọmentị Polish kacha mma maka ndị si mba ọzọ. Ọ kachasị maka ndị ga - achọ inweta ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ. Enweghị nsogbu nwekwara ikikere ọrụ na EU.
A na-enye akwụkwọ ikike ọrụ ọsọ ọsọ yana ogologo oge. N'ihi na ọmụmaatụ atụnyere mba Arab ndị ọzọ dịka Qatar ma ọ bụ UAE, anyị na-anya isi na eziokwu na thatkwụ na-achọsi ike ịkwado mba ndị ọzọ.
Osisi onwe ha ọtụtụ afọ gara aga lanarịrị Oké Mgbukpọ ahụ mebiri akụkụ nke Poland. Pomịaka ejisiri rụzigharị obodo ha, ha abụghị ndị na-akpa ókè agbụrụ na ha na-arụ ọrụ n'ezie na ụlọ ọrụ dị ike ma nyere onye nke ọzọ chọrọ enyemaka aka oge niile.
Mmechi nke mba kacha mma maka ịrụ ọrụ?
Ya mere, ka anyị tinye ya na mmechi nke obodo kacha arụ ọrụ. Mkpebi onwe onye bụ Dubai, Abu Dhabi, na ole na ole nke Obodo America na European. Na agbanyeghị akụkụ nke ụwa ị na-achọ ịrụ ọrụ. Kedu nke ga-akacha mma maka gị. Nke a ọ dị na North Cyprus ?. Ma ọ bụ London City ?. Ma ọ bụ ọbụna ịgbazite ụlọ ngwa ngwa, na njedebe, ọ ga-abụ onye Germany.
Mana ihe bụ isi ga-abụ mmepe ọrụ gị na ebumnuche gị onwe gị ị na-achọ iru. Mba ọ na-abịa dị iche iche ofzọ arụ ọrụ na ịkpata ego. Yabụ, ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ obodo na-ezighi ezi, ọ nwere ike ibute nsonaazụ.
Ọ dị mma, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n’ịchọ inweta ọrụ Hotel ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka injinia Aga m ahọrọ Dubai na Qatar.
Nke ahụ bụ ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ edere ede ma ọ bụ ọbụna ịzụ ahịa. Aga m ahọrọ London maka na ọ dị karịa maka ndi si gburugburu uwa.
Ọ bara uru iji rụọ ọrụ ná mba ọzọ?
Ee, ọ bụ, agbanyeghị na-arụ ọrụ na mba ofesi ọ bụ otu n'ime ihe kachasị amasị ma n'eziokwu usoro kachasị aga aga ga-adaba gị ka ị bụrụ onye ihe na-agara nke ọma na ndụ gị. Iji maa atụ, n’ime ohere nchịkwa, ị ga-enweta ezigbo ego.
Azụmaahịa na ịnweta Ọrụ dị gburugburu Globe bụ nnọọ ibu. Anọ m na-arụ ọrụ ná mba ọzọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ IT metụtara ya na ụlọ ọrụ Ego. Ee, enwere m ike ikwu na ọ ga - enyere m aka ịhapụ ndụ. Achọrọ m ịhapụ oge m niile.
Ga-enwe ike ịpụ ka m na-apụ na Europe. M ga-agba gị ume ka ị bụrụ onye nchịkwa nwere agụmakwụkwọ gụrụ akwụkwọ na nke nwere ahụmahụ. Na-arụ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Europe na n’ezie inyere ndị ọzọ aka iru ebumnobi ha. N'ihi na nke ahụ ga - enyere gị aka ịme atụmatụ nke gị maka ịkwaga n'ọdịnihu.
Ka ụlọ ọrụ m jide CV gị. Isi na nchekwa data anyị na Citylọ Ọrụ Dubai City. Ka anyị nyere gị aka rụọ ọrụ ná mba ọzọ. Kelee obi oma, John Smith CEO nke Dubai City Company.
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates na iji asụsụ gị.